जति सुकै बिजिभए पनी केबल २ मिनेट समय दिएर एक पटक अवस्य पढ्नुहोला ! -
Home समाचार जति सुकै बिजिभए पनी केबल २ मिनेट समय दिएर एक पटक अवस्य...
जसलाई देख्न सक्दिन , उसको आवाज सुनेर पनि खुशी छु। / जसलाई पाउन सक्दिन , उसको बारेमा सोचेर पनि म खुसी छु। हिजोको दिनहरू बितिसकेको छ , उसको मीठो सम्झनामा पनि म खुशी छु./ भोलिको बारेमा थाहा छैन , पर्खाइमा पनि म खुशी छु. / हाँस्दै खेल्दै बित्दै छ समय , आज मा पनि म खुशी छु. / जिन्दगी छ छोटो , हरेक पल म खुशी छु ।